विज्ञान / प्रविधि Archives - Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
के तपाईँले अरुको नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्नुभएको छ ?
काठमाडौं । अब अरुका नाममा भएको सीमकार्ड प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको छ । जसले प्रयोग गरिरहेको हो, उसैका नाममा सिमकार्ड दर्ता गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणको तयारी छ । प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोतम् खनालले जारी भएका सबै सीम सम्बन्धित प्रयोगकर्ताकै नाममा आगामी तीन महिनाभित्र दर्ता गरिसक्ने योजना बनाएको बताए । ‘केही दिनमै हामी मोबाइल सेवा प्रदायकमार्फत सबै प्रयोगकर्तालाई अरुका नामको...
काठमाडौं । अमेरिकी पार्टपुर्जा र सप्टवेयर खरिदमा प्रतिबन्ध झेलिरहेको चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेमाथि अर्को धक्का लागेको छ । अमेरिकी कम्पनी फेसबुकको पनि हुवावेका नयाँ स्मार्टफोनमा आफ्ना एप्सको प्रि–इन्स्टलेसन नदिने जनाएको छ । हुवावे स्मार्टफोन किनिसकेका ग्राहकले भने फेसबुक एप्स प्रयोग र अपडेट गर्न पाउने फेसबुकले जनाएको छ । तर, अब बन्ने नयाँ हुवावे फोनमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप हुने छैन । स्मार्टफोन...
‘गुगल र अरु फङ्सन नचल्ने खवरले घटे हुवावेका ग्राहक
काठमाडौं – गुगलले विश्वकै सबैभन्दा दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन निर्माण कम्पनी हुवावेको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमका अपडेट रोक्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा परेको छ । अमेरिकी नीतिसँगै नेपालमा हुवावे स्मार्टफोनको कारोबार निकै खस्किएको छ । बजारमा उपलब्ध हुवावेका सबै मोडेलको माग घटेपछि ग्राहकले अन्य विकल्प खोज्न थालेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘हामी जवरजस्ती गर्न सक्दैनौँ, ग्राहकले रुचाएका ब्रान्ड बेच्ने हो, काठमाडौंस्थित...
जापानमा जुन महिनाबाट एयु(au) मोबाईलको मासिक शुल्क सस्तो हुने, वर्तमान योजना भन्दा ४० प्रतिशत सम्म सस्तो योजना ल्याईँदै
टोकियो । जापानको मोबाईल फोन सेवा व्यवसायमा अग्रणी स्थान ओगट्ने केडिडिआई कर्पोरेशनले जुन १ तारिखबाट मोबाईल फोनको मासिक शुल्क घटाउने भएको छ । केडिडिआई कर्पोरेशनले जापानमा एयु मोबाईल सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । जापान सरकारको पछिल्लो दुरसंचार पोलिसी अन्तर्गत सेवाप्रदायकलाई प्रतिष्पर्धि मुल्य निर्धारण गराउन प्राप्त निर्देशनलाई अनुसरण गर्दै, कर्पोरेशनले सो निर्णय गरेको हो । जुन १ बाट एयु मोबाईल प्रयोगकर्ताहरुले...
फेसबुकका संस्थापकहरुबिच मतभेद, टुक्रिने सम्भावना !
एजेन्सी । मार्क जुकरवर्गलाई फेसबुकको स्थापना गर्न सघाएका क्रिस ह्युग्सले सो कम्पनीलाई तोड्नुपर्ने आह्वान गरेका छन् । बिहिबार ‘न्यु योर्क टाइम्स’ मा एक लामो लेख लेख्दै ह्युगले जुकरवर्गसँग हाल ‘निजी वा सरकारी निकायमा काम गर्ने कुनै पनि व्यक्तिभन्दा बढी प्रभाव भएको’ बताएका छन् । जुकरवर्गको ‘असाधरण शक्ति’ ले हानी पु¥याउन सक्ने भन्दै उनले ‘नियामकले फेसबुकलाई टुक्राउने समय आएको छ’ लेखेका छन्...
काठमाडौँ – अहिले मोबाइलको ब्यालेन्सबाट आफ्नो सेवा प्रदायकले दिने विभिन्न डाटा प्याकेज मात्रै किन्न मिल्छ । अबको केही महिनामा भने मोबाइलका प्रयोगकर्ताले आफ्नो ब्यालेन्सबाटै पसलमा सामान खरिद गरेर पैसा तिर्न, विद्युत् महसुलसहित विभिन्न सेवाको शुल्क तिर्न सक्नेछन् । मोबाइलको ब्यालेन्सबाट सामान खरिदबाट रकम तिर्न सकिने सेवा नेपाल टेलिकमले सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस्तो सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय...
अब नेपालमै मोबाइल बन्ने
काठमाडौं, १५ बैशाख । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमै मोबाइल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । सरकारको ‘मेक इन नेपाल’ योजना अन्तर्गत नेपालमै मोबाइल सेट निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्त गरी जिम्मा दिएको छ । ‘यो मेक इन नेपाल अन्तर्गत सरकारका तर्फबाट प्राधिकरणले मोबाइल फोन उत्पादन तथा एसेम्बलको सम्भावना अध्ययन गर्न लागेको हो’,प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनो चन्द्र श्रेष्ठ...
स्मार्टफोन किन्दै हुनुहुन्छ ? एक पटक अवश्य पढ्नुहोस्
बजारमा निकै धेरै ब्राण्ड, फिचर, तथा मूल्यका स्मार्टफोन उपलब्ध छन् । यस्तोमा आफ्ना लागि उपयुक्त स्मार्टफोन खरीद गर्नु सजिलो काम होइन । स्मार्टफोन यस्तो होस्, जसमार्फत स्मार्ट फोनबाट लिन सकिने सबै सुविधा प्राप्त गर्न सकियोस् । तर फोन खरीद गर्दा सबैका प्राथमिकता एकै खालका नहुन सक्छन् । कसैले क्यामरामा जोड दिन्छन् त कसैले उच्च क्षमतायुक्त प्रोसेसर भएको गेमिंग स्मार्टफोन...
जापानमा साईबर अपराधका घटना ३ वर्ष यताकै उच्च, सन २०१८ मा ९ हजार यस्ता अपराधहरु प्रमाणित !
टोकियो । सन २०१८ मा जापानभर ९ हजार ४० साईबर अपराधहरु भएको प्रहरीले जनाएको छ । नेश्नल पोलीसी एजेन्सीका अनुसार जापानमा, यसरी ईन्टरनेटको प्रयोग गरी, यौनजन्य अश्लिल गतिबिधि तथा ठगीमा परेका/ पारिएका गतिविधिको यो तथ्यांक्क पछिल्लो ३ वर्ष यताकै उच्च हो । यो संख्या सन २०१४ को तुलनामा १ हजार बढेको हो, यसरी यस्ता घटनाहरु बढ्नुले थप गहनरुपमा सोच्नुपर्ने अवस्था खडा...
यसरी थाह पाउन सकिन्छ वाईफाईको पासवर्ड
अहिलेको डिजिटल समय मा हामी सबैसँग स्मार्टफोन हुन्छ नै । स्मार्ट फोन भएपछि थ्री जी वा वाइफाइबाट इन्टरनेट चलाउने कुरा कुनै नयाँ कुरा भएन । तर कहिले काँहि बाहिर कतै जादा वा आफ्नो इन्टरनेटले काम नगर्दा नेट चलाउन नपाएर छटपटी हुने गर्छ । यस्तै स्थिति मा कसैको वाइफाइ पासवर्ड थाहा पाउन पाए १ पक्कै रमाइलो हुन्छ । कलेज,सपिंग मल वा...